औसत प्रेम कथा « LiveMandu
औसत प्रेम कथा
२७ मंसिर २०७५, बिहीबार १७:०४
रोमीयो र जुलियटको प्रेमकथा अझै पनि सुपरहिट छ यसैबिचमा जेम्स क्यामरुनले बनाँए टाईटनिक जस्मा उन्ले टाईटनिक जहाज सँगै धेरै यूवा ढुकढुकीहरु लाई नि डुबाईदिए एउटा बियोगान्त कथाभित्र । यता एउटा बादहाशले आफ्नो प्रेमीकाको लागी ताजमहल बनाईदिएको ईतिहास नि छ, मान्छेहरु अझै भन्ने गर्छन र सुनाँउने गर्छन “आहा कस्तो राम्रो एउटा उदहारण, माया त यस्तो पो हो त ” भनेँर ।
यो छोटो प्रेमकथामा उन्ले उस्लाई छोडिन जस्का कारणहरु थुप्रै हुनसक्छन जुन मैले यहाँ कोट्याउन चाहिन । उनि उस्को जुलियट बन्न सकिनन या भनौँ उ उन्को ज्याक बन्न सकेन र उनिहरुको प्रेमको टाईटनिक त्यसै डुबेर गयो । अगाडीका सबैकुराहरु फ्लाशब्याक हुन् , उ आज पनि माथी आकाशमा बिदेशबाट आएका ठूला पिलेनको आवाज निको मान्दैन जस्को उसँग आफ्नै कारण छ ।
यो संसार गोलो छ, यहाँ धेरै दोबाटाहरु छन् र जिवन लामो छ । एकदिन उस्ले उनलाई त्यस्तै कस्तै दोबाटोमा भेटेर सोध्नेछ रे आखिर किन यस्तो गर्यौ भनेँर ? हुन त उन्ले जति नाँईनास्ती गरेपनि मान्नेले मानिदिए पो ? उन्का बुवाआमा आफ्नी एउटैमात्र छोरीलाई बिदेश पठाउन र लाहुरेलाई अन्माएर दिनपाएकोमा बेजोड खुशी थिए रे तर पोहोरको साल उन्कीआमाको पुरानो गानो दुख्ने बेथालाई ओखतीले नि नभेटेर डाक्टरकैमा लगेर चारदिन त सलाईनपानी दिएरै राखेको । अस्पतालमा साह्रै हुनुन्छ भनेँको सुनेपछि उस्की आमालाई पूर्याउन त्यहि साईकलमा उ पनि गएको थियो,छोरीलाई नभेटी मर्नेभएँ भनेँर उस्की हुननसकेकी सासुआमा रुँदैथिईन । छोरी नजिकै होस भनेँर चिताउनेले किन सात समुन्द्र पठाउनु ? अस्पतालकोठाको दैलोमा बसेर उ सोच्दैथियो । बुढी अलिक बिसेक भएर घरमा आएकी छिन तर बेलाबेला अभर पारिरहन्छ रे । बिहेगरेर गएपछि चारबर्षमा प्रथम पटक उनि आउने रे भन्ने सुनियो यस्पाला बैशाखमा,
भावना उर्लेर आएपछि प्रश्न बिनानै जवाफ आउने रहेछ, उ क्रमश प्रश्न बिनाको जवाफ प्रस्तुत गर्दै गयो ।
बिर्सन त झन गाह्रो बरु संझिन सजिलो, उ लामो श्वाँस फेर्छ ,